स्वास्थ्य /जिबनशैली Archives - Filmy Hotline
सावधान ! यस्तो अवस्थामा खानु हँदैन मेवा,७ बेफाइदा सहित
एजेन्सी – म्याग्नेसियम, पोटासियम, नियासिन, प्रोटिन र क्यारोटिन तथा डायटरी फाइबर जस्ता शरीरलाई फाइदा दिने तत्वहरुले भरिएको मेवाले बेफाइदा पनि गर्छ । मेवाको सेवन कुनै समयमा शरीरका लागि निकै घातक हुनसक्छ । आयुर्वेदका अनुसार मेवा सेवन शरीरको लागि जति धेरै फाइदाजनक छ त्यति नै यसका नराम्रा असरहरु पनि छन् । १ गर्भवती महिलाका लागि गर्भवती महिलाले मेवाको सेवन गर्नु हानिकारक मानिन्छ । मेवाले गर्भाशयलाई संचित गरिदिने भएकाले यसको सेवनले गर्भपतन हुन सक्ने खतरा बढ्छ । २ स्तनपान गराउँने महिला गर्भावस्थामा मात्र नभई बच्चा जन्माइसकेपछि पनि मेवाको सेवन हानिकारक मानिन्छ । मेवामा पाइने पापेन (papain) नाम विषाक्त पदार्थले बच्चामा गम्भीर असर पार्दछ । त्यसैगरी, बच्चा एक वर्षको नहुदासम्म मेवा खुवाउँन घातक मानिन्छ । ३ एलर्जी क्यारोटेनिया नामक रोगको विरामीले मेवाको सेवन गर्नु हुदैन । मेवामा भएक
काठमाडौ । कसैलाई भान्सामा खुर्सानी नभई भाग नै रुच्देन । यसैले जहिलै खुर्सानी किन्न बजार जाने गर्दछन् । तपाईपनि खुर्सानी किन्न जानुहुन्छ भने याद राख्नुहोस् तपाईले छनोट गर्ने कुनै खुर्सानी अमृत हो भने कुनै विष हो । खुर्सानी खानू स्वास्थ्यका कारण राम्रो मानिन्न । चिल्लो पिरो कम गर्नुहोला भनेर चिकित्सकले भन्ने गर्नुहुन्छ । तर तपाई हामीलाई यो जानकारी हुन जरुरी छ की चिकित्सकको रोजाई र स्वास्थ्य क्षेत्रले नै प्रमाणित गरेको कुरा यो छ की अकबरे खुर्सानी भने मानिसका लागि अति नै उपयोगी हो । जुन तपाई हाम्रै घरमा पाइने डल्ले अर्थात रातो खुर्सानी औषधिका रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ । डल्ले खुर्सानीको नियमित प्रयोगले ग्यास्टिक तथा अल्सर जसता रोगको औषधि समेत हुन्छ । डल्ले खुर्सानीमा पाइने क्याप्सिसिनका कारण रोगीलाई फाईदा पुग्ने बताइएको छ । यो खुर्सानीको नियमित सेवनले रोगहरू निको हुन्छ । त्यसबाहेक डल्ले खु
यस्तो छ स्याउ खानुका फाईदा
स्याउमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर, क्याल्सियम र एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ । स्याउमा पाइने यी पोषक तत्वले मानिसलाई निरोगी बन्न सघाउँछ । स्याउ सेवनले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउनुका साथै सुगर नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ । साथै, रक्तसञ्चारलाई यथावत् राख्न पनि सघाउ पु-याउँछ । स्याउमा पाइने फाइबरले कब्जियत कम गर्छ । पायल्सका बिरामीले नियमित स्याउ खाएमा समस्या क्रमशः कम हुँदै जान्छ । स्याउको सेवनले मस्तिष्कमा रहेका कोषिकाको रक्षा गर्छ । साथै, अल्जाइमरको खतरालाई पनि कम गर्छ । नियमित स्याउ खाँदा मोटोपन हटाउन सहयोगी हुन्छ । साथै, मोटोपनबाट हुने हृदयाघात, डायबिटिज, मुटुरोगजस्ता विभिन्न समस्याको सम्भावना हुँदैन । ब्रोकासहितको फाइबरयुक्त स्याउ खाँदा पित्तथैलीमा जमेर बसेको कालेस्ट्रोललाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । यसरी पित्तथैलीमा हुने पत्थरीबाट जोगिन मद्दत पुग्छ ।
गर्मीमा सफ्ट ड्रिंक, स्वास्थ्य जोगाउन नपिएकै राम्रो
एजेन्सी । गर्मीको सिजन शुरु भएसँगै कोलाजन्य सफ्ट ड्रिंकको उपभोग ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । सहजै पाइने भएकोले पनि गर्मी हुनासाथ सफ्ट ड्रिंक प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति दिन प्रतिदीन बढ्दो छ । यसले बेफाइदा गर्ने सबैलाई थाहा भएपनि मानिसहरुले यसप्रति त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । यसकारण हानिकारक सफ्ट ड्रिंक स्वादिलो र आकर्षक बनाउनको लागि अनेक रङ्ग तथा क्याफीन र अनेक कृत्रिम मिठास हालिएको हुन्छ । ३५० मिलिलिटरको एक बोतल सफ्ट ड्रिंकमा १० चम्चा बराबर चिनी हुन्छ । यो परिमाणको चिनीले अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या ल्याउने बताइन्छ । त्यस्तै यसमा भएको क्याफीन तत्वले यो खाने बानी नै लाग्ने गर्दछ । यस्ता छन् सफ्ट ड्रिंकका बेफाइदाहरु मधुमेह सफ्ट ड्रिंकमा हुने चिनीको मात्रा पचाउन हाम्रो शरिरको इन्सुलीन तत्वलाई अनावश्यक भार पर्दछ । हाम्रो व्यस्त जीवनशैलीका बावजुद धेरै शारीरिक मेहनत नगर्ने प्रवृत्ति भएकाले सफ्
गर्मीमा खानैपर्ने यी ६ प्रकारका तरकारी
गर्मी मौषममा खानपान नमिल्दा स्वास्थ्मा समस्या आइहाल्छ । जाडो मौसमको तुलनामा गर्मीमा पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ । यस्तो जे मन लाग्यो त्यो खाना खानु हुँदैन । विशेष गरेर तारेको या मसालायुक्त खाना खाँदा फुड प्वाइजनको समस्या हुन सक्छ । हरियो सिमी हरियो सिमीमा भिटामिन ए, सी र बी सिक्स पाइन्छ । यो फोलिक एसिडको पनि राम्रो स्रोत हो । यसका अलावा क्याल्सियम, सिलिकन, आइरन, म्याङनिज, बिटा क्यारोटिन, पोटासियम र कपर तत्व पनि सिमीमा पाइन्छ । यसले रोग प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि गर्छ । लौका लौकामा करिब ९६ प्रतिशत पानी हुन्छ । लौका चिसो खालको तरकारी हो । यसले कलेजो स्वस्थ राख्न मद्धत गर्छ । क्यालोरी कम हुने भएकाले सजिलै पचाउन सकिन्छ । यसले पेट सफा पार्छ । ग्यास बन्न दिँदैंन । फाइबर पनि हुने हुनाले अल्सर, पायल्स र ग्यास्ट्रिकका रोगीका लागि लाभदायी हुन्छ । करेला करेलालाई मानिसले सजिलै पचाउन सक्छन् । यसमा फस
काफल बन्यो आम्दानीको स्रोत, बेच्न सडकमा लाइन
पंखबहादुर शाही, जेठ १३, दैलेख । यस जिल्लाको गुराँसे क्षेत्रमा पाइने काफलको चर्चा परिचर्चा यतिखेर जिल्लाभित्र मात्र होइन अन्यत्र पनि भइरहेको छ । यो सिजनमा स्वादीलो काफलको वर्णन नगर्ने कोहि छैनन् । यहाँ गोरखा जिल्लादेखि दैलेखको दुल्लु भ्रमणमा आइपुगेका एक जना आन्तरिक पर्यटकले गुराँसे क्षेत्रको काफलको बर्णन गरे । उनी मात्र होइन अहिले दैनिक सयौंको संख्यामा उक्त क्षेत्रमा अन्तर्गत पर्ने सुर्खेत –दैलेख सडकमा सवारीहरु आवत जावत गर्दछन् । साना स्कुले बालबालिकादेखि वृद्ध सम्मका मान्छेहरु आजभोली डालो समातेर सडकमा काफल लिएर उभिएको देखिन्छन् । सडकमा डालोमा काफल राखेर बेच्नेहरुको लाइन लागेको देखिन्छ भने कोहि जंगलमा दुना र टपरी प्रयोग गरेर काफल टिप्न व्यस्त छन् । काफल जंगलबाट टिपेर ल्याई विक्री गर्न दैनिक जसो भ्याइन नभ्याई छ । विक्री गर्नको लागि कुनै समस्या नपर्ने भएपछि अहिले धेरैले काफल बेच्ने क
नेपाली जंगलभरी सून जस्तै टल्किने यो कुन फल हो ? जान्नुहोस् यसका अचुक फाईदा !
काठमाडौं । नेपाली जंगलमा सून जस्तै टलल टल्किएका पहेलपुर दानासरी देखिने फलहरुको राजा हो ऐसेलु । यो फल मात्र हैन एक अचुक जडिबुटी समेत हो । रुघा, खोकी, टाईफाईट जस्ता घातक रोगका औषधि बनाउनपनि यसको प्रयोग हुन्छ । विश्वको महंगो वाईनपनि यही फलबाट बन्दछ । अब जंगलमा ऐसेलु खाने बेला भएको छ । ऐसेलुसँग नेपाली पहाड र नेपाली मनमा एउटा गहिरो नाता छ । यसपटक पनि ऐसेलु फलेर भ्याइन आँट्यो । बनैलाई पहेँलपुर बनाएर फल्ने यस फल काँढा भित्र लुकेको एउटा बुट्यान अझ भनौ झाडीभित्र पाइन्छ । अग्रेंजीमा गोल्डेन हिमालयन र्यास्पबेरि भनिने ऐसेलुको नेपालमा सामाजिक, सास्कृतिक अनि जिवनशैलीगत पहिचान धेरै छ । हामीमध्ये धेरैको बाल्यकाल ऐसेलुको याद वरिपरि घुमेको हुनसक्दछ, एसेलु टीप्न जाँदा काँढाले बनाएका खतहरु हामीमध्ये धेरैका हातमा हुनसक्दछन् । विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेपनि त्यो बाल्यकाल झल्को दिने ऐसेलुलाई प्यारो गरी
१) निमको तेल : निमको तेलमा शुक्राणु नाशक शक्ति हुन्छ । सम्भोग गर्नु पूर्व यसको प्रयोग गर्नाले गर्भाधान हुने सम्भावना कम हुन्छ । २) सिधे नुन : सम्भोग गर्नुपूर्व तिलको तेलमा मिलाएको सिधे नुनको लेप योनीमा राख्नाले गर्भ रहँदैन । ३) मेवाको वियाँ : रिलेसनको समय मेवाको वियाँ सेवन गर्नाले गर्भाधान हुने सम्भावना कम हुन्छ । साथै यसको सेवनले गर्भपतन समेत हुन सक्छ । ४) खुर्पानी : हरेक दिन एक कप पानीमा २ वटा खुर्पानी मिलाएर सेवन गर्नाले गर्भ रहने सम्भावना निक्कै कम हुन्छ । ५) कपास : कपासको जरा पानीमा उमालेर सेवन गर्नाले अक्सीटोसीनको लेवल शरीरमा बढ्छ । जसले गर्भाधान हुनबाट रोक्छ । ६) पिप्पली : सम्भोगको समयमा पिप्पलीको बियाँको पाउडर दुधसँग मिलाएर खानाले गर्भाधानबाट बच्न सकिन्छ ।
काफल किन खाने, थाहा पाऔ यसका फाइदा यस्ता छन
यो गर्मी याममा पहाडका वन पाखाहरूमा पाकेको हुन्छ । यसको फलको आकार लाम्चो र गोलो आकारको हुन्छ। यसको स्वाद अमिलो मिठो हुन्छ। यसको फलको रंग काँचोमा हरियो हुन्छ । पाकि सकेपछी रातो र धेरै पाकेपछि बैजनी रंगको हुन्छ । पहाड तिरका मानिसहरू गर्मी याममा काफलको रूखमा चढेर काफल खानमा तल्लिन रहन्छन् । काफललाई हामीले फलको रुपमा मात्र प्रयोग नगरेर यसलाई औषधीको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । थाहा पाऔ काफलका औषधीय गुणहरू… – कर्णशूलमा: काफलको बोक्राको काढा तिलको तेलमा पकाई तेल मात्र रहेपछी चीसो पारेर दुई तीन थोपा तेल कानमा चुहाए कर्णशुल र पीप बग्ने तथा बहिरो हुन खोजेको पनि निको हुन्छ । – अतिसारमा: तीन गर्ाम काफलको बोक्रा र तीन ग्राम बालो बेलको काढा पकाई एक-दुई ग्राम तीन-चार पटक पिए अतिसारमा आराम हुन्छ । – मासिक धर्ममा: कैसर, कालो तिल र पुरानो गुड(शक्कर) र काफलको बोक्रा मिलाई काडा पकाएर पिलाए मासिकधर्म स
कस्तो हुन्छ शुद्ध मह ? जानिराखौ
काठमाडौं – नेपालमा व्यावसायिक मौरीपालकबाट लगभग वार्षिक २५ सय मेट्रिक टन मह उत्पादन हुन्छ । महमा नक्कली रङ वा अखाद्य वस्तु मिसाएको हुन्छ भन्ने कतिपय विज्ञहरूको तर्क पाइन्छ । यदि, यस्तो भेटिएमा सम्बन्धित निकायले पत्ता लगाई उचित कारबाही गरियोस् भन्ने मह व्यावसायीको धारणा छ । अब जानौं शुद्ध महमा पाइने विशेषताबारे । अप्रशोधित मह वा चाकासहितको मह काढेको केही दिनमा नै प्रयोग गरी सक्नुपर्छ, अन्यथा महमा मैन, कुट र अन्य अवशेषले गर्दा मह बिग्रिन गई खान योग्य नहुन सक्छ । त्यसैले, महलाई खानयोग्य बनाउन महको गुणलाई नष्ट नहुने गरी प्रशोधन गरी मह बिक्री–वितरण गर्ने राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय चलन छ । यो नै मह प्रयोग गर्ने भरपर्दो उपाय हो । आधुनिक व्यावसायिक मौरीपालक कृषकले ८०% मह सिल गरेपछि मात्र निष्कासन गर्ने प्रचलन छ । यस्तो मह निकाल्नका लागि मौरीलाई कम्तीमा ३ घन्टा लाग्ने गर्छ । छोटो समयमा मह निष्